The dijitalụ Canon laghachi, mgbe a kpọsịrị iwu na European Union | Akụkọ akụrụngwa
N'oge gọọmentị Zapatero, akwụkwọ ikike dijitalụ malitere, ụtụ a na-etinye na ngwaọrụ ọ bụla nwere ike ịchekwa ọdịnaya, ma ebudatara ya n'ụzọ iwu na-akwadoghị ma ọ bụ bụ ọdịnaya nke ndị ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ mepụtara.
Mgbe ọtụtụ ọbịbịa na ngbanwe, canon ahụ mebiri na 2011 yana na Jenụwarị nke afọ gara aga ka ekwuputara na iwu akwadoghị ịlaghachi na August 1 yana arụmọrụ ya yiri nke gara aga, mana oge a ihe ezubere maka ndị ọkachamara agaghị emetụta canon a.
Mgbe emebiri iwu, akwụ ụgwọ nke ndị mepụtara ọdịnaya gara na mmefu ego steeti niile, nke mere na ndị Spain niile, ma ha ejiri usoro nchekwa nchekwa dijitalụ, kwụọ ya. Ka ọ dị na Ọgọstụ 1, akwụkwọ ntanetị ọhụrụ ga-akpa oke n'etiti iji ngwaọrụ ma ọ bụ ngwaahịa iji chekwaa ọdịnaya ma ọ bụrụ maka ojiji nkeonwe ma ọ bụ nke azụmahịa, otu n’ime ihe ndị mere e ji machibido ya iwu.
1 Onye akwụ ụgwọ na onye anaghị akwụ ego ahụ
2 Kedu ngwaọrụ ndị ihe omimi ọhụụ ọhụrụ na-emetụta?
Onye akwụ ụgwọ na onye anaghị akwụ ego ahụ
Ndị niile ahụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ahụ raara onwe ha nye na ngalaba ọrụ aka ma kwenye ya, ga-enwere onwe ha ịkwụ ụgwọ ego a, ebe ndị ọrụ nkịtị agaghị enwe ihe ọzọ ma ọ bụghị ịgafe hoop na kwụọ ụgwọ e guzobere na ngwaọrụ ahụAmaara m na m na-egosi gị na ngalaba na-esote.
Ndi mmadu n’egosiputa na ihe ha meputara bu nke ha puta na mba ozoHa nwere ike ịrịọ enyemaka ma ọ bụ nkwụghachi nke ego akwụgoro na mbụ n'oge nzụta.
Ndị ụlọ ọrụ na-eji mgbasa ozi nchekwa iji mepụta mbipụta ndabere, ha ga-agafe igbe ahụ, ihe nke na ha enweghịdị isi na-eche na ọdịnaya echekwara bụ nke ha, na agaghị ekekọrịta ya n'oge ọ bụla.
Kedu ngwaọrụ ndị ihe omimi ọhụụ ọhụrụ na-emetụta?
N'elu ogo nke ego kachasi elu iji kwụọ ụgwọ maka dijitalụ dijitalụ, draịva siri ike mpụga 6,45 euro, draịva siri ike n'ime 5,45 euro, ndị na-ebi akwụkwọ nwere igwe nyocha 5,25 euro, ndị na-ebi akwụkwọ 4,50, mbadamba 3,15 euro, ndị na-edekọ DVD 1,86 euro na ekwentị 1,10. Egwu emetụtala egwu ma ọ bụ vidiyo vidiyo ka canon na-emetụta ya n'oge a, ma ihe niile ga-arụ ọrụ.
O doro anya USB skewers, CD na DVD, ma a ga-edegharị ma ọ bụ na ọ gaghị emetụta ọ bụ ezie na ọ pere mpe, n'etiti 8 na 28 cents n'otu n'otu. Ruo ugbu a, ọrụ nchekwa igwe ojii emetụtaghị, mana gọọmentị nwere nhọrọ iji tinyekwuo ngwaọrụ, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ na ndepụta ahụ, ihe na-ekwesịghị iju anyị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Dijitalụ canon lọghachiri, mgbe European Union kwupụtara na iwu akwadoghị
Samsung na-arụ ọrụ na standalone virtual eziokwu ekweisi